Clamps amin'ny lolozy plastika plastika Manufacturers and Suppliers - Factory China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Fiarovan-tena sy fanakam-basy > Clamps Clamping > Clamps amin'ny lelavola plastika plastika
Ny fametahana ny tady dia ny metaly na plastika, ary ny endrika dia tapa-kevitra ny mpanjifa. Ny loko hafa dia hafa koa, ny mpanjifa dia afaka mifidy manga, mena, mavo ary loko hafa koa. Ny clamps dia mety karazana Alemana sy karazana Amerikana.
Product Introduction of clamps with a plastic luggage plastic
Alemaina Fipetrahana Closure Closures miaraka amin'ny lolozy plastika Handingana ny famotsorana fametahana hosoka ho an'ny pvc rafitra fitting.
Product Parameter amin'ny clamps amin'ny lelavola plastika plastika
Araka ny zavatra takinao
Tailandey: 9mm 12mm / American type: 8mm 12.7mm
Solt type fanisoana
Vita vy vita amin'ny vy, tsy misy rongony 201, stainless steel 301, stainlesssteel 304, karbonika
Kitapo plastika, carton na mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa
Ny karazana hosodoko isan-karazany dia mampitombo ny fifandraisana amin'ny fifandraisana
Karazan-tsakafo sy fampiharana ny clamps amin'ny lelavola plastika plastika
1) Vita amin'ny vy sy vy mahamay be
2) Fanoherana tsara
3) Fomba maro karazana misy
4) Fiompiana tsara tarehy China
5) Dingana avo lenta
6) Fitaovana tsotra
7) Fahamatorana tsara
8) Torolalana maimaim-poana sy fihodinana fohy
fampiharana: Ny karazana hosodoko isan-karazany dia mampihena ny fampifanarahana.
Taridalana momba ny kavina amin'ny lelavola plastika plastika
Packaging Details:Kitapo polisy sy boaty misy carton na entana toy ny fangatahan'ny mpanjifa
Hot Tags: Clamps amin'ny lelavola plastika, China, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, Made in China, Wholesale, Buy, Customized, An-tsompitra, Bulk, Vidiny, Vidy, Teny fohy, High Quality
Takelaka kisary alemà mitana lelavolaFitaovana plastika lohamilina lohataona alemà mitarika fantsom-pandaminana